Ahlu Sunna: DFS waxay baalmartay dastuurka iyo wadiiqadi lagu heshiiyey
By Xigasho BBC
Ururka Ahlu-Sunna Waljamaaca, ayaa sheegay inuu aad u saluugsan yahay qorshaha dib u heshiisiinta ee ay Galmudug ka waddo Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya.
Ahlu-Sunna ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in aanay ku qanacsanayn sida loo wado shirka dib u hishiisiinta ee ka socoda magaalada Dhuuso-Mareeb.
Haddaba waxayaalaha ay saluugsan yihiin iyo bayaanka ay dib u heshiisiinta ay waddo Dowladda Federaalka Soomaaliya ka soo saareen waxaa BBC uga warramay Sayid Maxamed Xaashi oo ka mid ah xildhibaannada Galmudug ee ka soo jeeda dhanka Ahlu-Sunna.
"Waxaan saluugsannnahay waxaa waaye waxaa jirtay iney Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Galmudug ay heshiiyeen oo la isu yimid oo la yiri mugdi mugdigi jiray ha laga gudbo, shacabka deegaankana waxay filayeen in loo gudbo neecaaw iyo iney ummaddu u gudubto nabad, midnimo, wadajir iyo maamul goboleed dowladda dhex oggol iyo in maamul goboleedka deegaanka oo dhan uu u dhan yahay la dhiso."
"Iyada oo arrimahaasi oo dhan la filayo ayaa waxaa soo ifbaxday in deegaannadi alshabaab laga xoreeyey in dib gacanta looga geliyo la rabo , in habraaci maamul ee la filayey in deegaanka laga dhisana la baal marayo arrimahaasi ayaaa keenay inaan batyaan aan dowladda dhexe sida ay wax u waddo kaga soo horjeedno soo saarno" ayuu yiri Xildhibaan Sayid Maxamed iney Ahulusunna waljamaaca.
Xildhibaan Sayid Maxamed waxaa kale oo uu sheegay "Dowladda Federaalka ayaa baal mareysa oo ka baxeysa wadiiqadi iyo waddadi lagu heshiiyey ee dastuuriga ahayd marka culimaduna iyaga oo ka cabsi qaba in deegaanku ay dagaallo ka dhacaan ay iisu yimaaddeen oo ay go'aankaasi qaateen.
"Dowladda dhexe waan heshiinnay waxaanna ku heshiinnay qodobbo dastuuri ah wax walba oo la qabanaya oo galmudug la xiriirana is-oggolaasha iyo wadatashi lagu sameeyo marka dowladda dhexe ayaad moodda iney isku gaar yeeleyso danta ay doontaba ha ka lahaatee iney awooddi maamul iyo dhanwalba oo ay noqoto isku gaar yeeleyso ayaan diiddannahay."
"Guddiga dib u heshiisiinta ee la magacaabay raalli kama aanan ahayn waxna kama aanan magacaaban marka annaga oo og inaan waxba kamagac caabin ayaan haddana niri bal naga daayo oo haddey wax qaban karaan wax ha qabtaan, guddigaasi oo habayaraatee waxba xog ogaal aan u ahayn dhaqanka deegaanka ka jira iyo beelaha deegaanka waxay sida oo kale ka mid tahay waxayaabaha an diiddannahay" ayuu yiri xildhibaanku.
"Sida oo kalana deegaankan in ciidama AMISOM la keeno wax baahi ah oo baahi ciidan ah kama jirto deegaankan, ciidanku marka la keenayo waa in la yirahdo dhaliishan ayaa jirta waa in la yirahdo baahidan ayaa jirta, marka baahi haddii ay jirin maxaa loo dalbanayaa wxaan u aragnaa in la rabo in dad la raba in lagu cabbiriyo iyo dowladda iney u isticmaasho rabto awood iyo ismaquunin" ayuu yiri Xildhibaan Sayid Maxamed Xaashi oo ka mid ah xildhibaannada Galmudug ee ka soo jeeda dhanka Ahlu-Sunna.
Ahlusunna oo gashay heshiis khilaafka kala dhaxeyo dowladda dhexe ee Soomaaliya lagu soo afjarayo ayaa bishi June 2019-ka ciidamo ku wareejisay dowladda dhexe, si ay ciidamo qaran u noqdaan.
Maamulka Galmudug oo laba dhinac u kala jabnaa oo in muddo ah uu khilaaf kala dhaxeeyay Dowladda Federaalka, ayaa ugu dambeyn heshiis la galay Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Ahlu Sunna oo muddeysay doorashada madaxtinimada Galmudug
Soomaliya 22.01.2020. 14:04
Hogaanka ururkan ayaa soo saarey jadwal ay cad yihiin in ay qabanayaan doorasho kale.
Wararkii ugu dambeeyay dagaal culus oo ka dhacay Galgaduud
Soomaliya 19.11.2018. 16:16
Xaaf oo ku Magacaabay Gole Wasiiro cusub [Akhriso Liiska]
Soomaliya 14.10.2018. 00:51